Enwere ekpere maka nchegharị? | EKPERE NA OZI
Enwere ekpere maka nchegharị?
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 3, 2020 Septemba 3, 2020
Jizọs kpere ekpere ka anyị mee. Ekpere a bụ naanị ekpere e nyere anyị na-abụghị ndị dị ka ekpere ndị mmadụ mere “ekpere”.
N’ihi ya, ọ gwara ha, sị: “Mgbe unu na-ekpe ekpere, sịnụ,‘ Nna anyị nke bi n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ. Bịa alaeze gị. Ka eme uche-gi n'uwa dika esi eme ya n'elu-igwe. Nye anyị nri anyị kwa ụbọchị. Gbagharakwa anyi nmehie anyi, dika anyi na agbaghara ndi nile ji anyi ugwọ. Ekwela ka anyị daba n'ọnwụnwa, kama napụta anyị n'aka ajọ onye ahụ ”(Luk 11: 2-4).
Mana enwere otutu oge n’Akwukwo nso ebe egosiputara ncheghari n’isi nke Abuoma 51. Dika otutu ndi no n’ime Akwukwo nso, ayi n’emehie n’amara na ayi n’emehie ma mgbe ufodu, anyi anoghi na anyi emehie. Ọrụ anyị bụ ịnọgide na-agbakụta mmehie azụ, ọbụlagodi mgbe ọ bụ ọgụ.
Na-adabere n'amamihe nke Chineke
Ekpere anyị nwere ike ịgba anyị ume, bulie anyị elu, ma duga anyị na nchegharị. Mmehie na-eduhie anyị (Jemes 1:14), na-eripịa uche anyị, na-anapụ anyị nchegharị. Anyị niile nwere nhọrọ ma ànyị ga-anọgide na-eme mmehie. Offọdụ n'ime anyị na-alụso ọchịchọ anụ ahụ na nke mmehie anyị ọgụ kwa ụbọchị.
Ma ụfọdụ n'ime anyị maara na anyị emehiela ma ka na-eme ya n'agbanyeghị (James 4:17). Ọ bụ ezie na Chineke anyị ka na-eme ebere ma hụ anyị n'anya nke ga-enyere anyị aka ịnọ n'ụzọ nke eziomume.
Ya mere, olee amamihe Bible na-enye anyi iji nyere anyi aka igh ota mmehie na ihe o na-akpata?
Ekliziastis 7 na-adụ gị ọdụ ka ịghara ịhapụ iwe gị ma ọ bụ ịbụ onye maara ihe gabiga ókè. Ma ihe dọtara uche m n’isi nke a bụ n’Eklisiastis 7:20, ma kwuo, sị, “N’ezie, ọ dịghị onye ezi omume ọ bụla nọ n’ụwa nke na-eme ihe ọma, ọ dịghịkwa emehie. Ayi apughi iwezuga nmehie nihi na amuru ayi nime ya (Abuoma 51: 5).
Ọnwụnwa agaghị ahapụ anyị na ndụ a, mana Chineke enyela anyị Okwu ya ka anyị lụso ọgụ. Nchegharị ga-abụ akụkụ nke ndụ anyị ma ọ bụrụhaala na anyị bi n’anụ mmehie a. Ndị a bụ akụkụ ọjọọ nke ndụ nke anyị ga-atachirị obi, mana anyị agaghị ekwe ka mmehie ndị a na-achị obi na n'uche anyị.
Ekpere anyị na-eduga anyị na nchegharị mgbe Mmụọ Nsọ na-ekpughere anyị ihe anyị ga-echegharị. Enweghị ụzọ ziri ezi ma ọ bụ ụzọ ọjọọ iji kpee ekpere maka nchegharị. O sitere na ezi nkwenye na ichighari azu na-egosi na anyi ji anyi egwu. Ọ bụrụgodị na anyị na-agba mbọ. “Obi nke nwere ezi uche na-enweta ihe ọmụma, ọ bụkwa ntị nke ndị maara ihe na-achọ ihe ọmụma” (Ilu 18:15).
Na-adabere n'amara Chineke
Na Ndị Rom 7, Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na iwu anaghịzi ejigide anyị n'agbanyeghị na iwu n'onwe ya ji amamihe Chineke na-ejere anyị ozi. Jizọs nwụrụ maka mmehie anyị, yabụ ka enyere anyị amara maka ịchụ aja ahụ. Mana enwere nzube na iwu dịka o kpugheere anyị ihe mmehie anyị bụ (Ndị Rom 7: 7-13).
N'ihi na Chineke dị nsọ na enweghị mmehie, ọ chọrọ ka anyị ga n'ihu na-echegharị ma gbanahụ mmehie. Ndị Rom 7: 14-17 kwuru,
Ya mere nsogbu adighi na iwu, nihi na odi nke ime mmuo ma di nma. Nsogbu dikwa m, nihi na abum onye mmadu, burukwa ohu nke nmehie. Aghọtaghị m onwe m, n'ihi na achọrọ m ime ihe ziri ezi, mana anaghị m. Kama, m na-eme ihe m kpọrọ asị. Ma ọ bụrụ na m ma ihe m na-eme bụ ihe ọjọọ, ọ na-egosi na m kwetara na iwu ahụ dị mma. Ya mere, ọ bụghị m bụ onye na-eme ihe ọjọọ; ọ bụ nmehie nke bi n’ime m na-eme ya.
Mmehie na-eme ka anyị mehie, mana Chineke nyere anyị njide onwe onye na amamihe ya sitere n'okwu ya ka anyị pụọ. Anyị enweghị ike ịgọpụ mmehie anyị, mana site na amara Chineke na-azọpụta anyị. “N'ihi na mmehie agaghị achị unu, n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara” (Ndị Rom 6:14).
Ma ugbua ezi omume nke Chineke egosiputawo onwe ya nenwegh iwu, obu ezie na iwu na ndi amuma nekwuru ya - ezi omume nke Chineke site n’okwukwe na Jisos Kraist nye ndi nile kwere. N'ihi na ọ dighi ihe di iche: n'ihi na madu nile emehiewo, ha adighi-eru kwa otuto Chineke, ewe gua ha na ndi ezi omume site na amara-Ya dika onyinye, site na nb redaputa nke di nime Kraist Jisus, nke Chineke churu dika nmehie-ya site n'ọbara-Ya, nata okwukwe. Nke a bu igosi ezi omume Chineke, nihi na site na nnabata ya, Chineke meriri nmehie nile nke mbu. Ọ bụ iji gosi ezi omume ya ugbu a, ka o wee bụrụ onye ezi omume na izi ezi nke ndị nwere okwukwe na Jizọs (Ndị Rom 3: 21-27).
Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ ikwesị ntụkwasị obi na ikpe ziri ezi ịgbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụ anyị ikpe na-ezighị ezi niile (1 Jọn 1: 9).
N'ime oke atụmatụ nke ihe, anyị ga-anọkọ na mmehie na nchegharị. Ekpere anyị nwere nchegharị kwesịrị isite n’obi anyị na Mmụọ Nsọ nke dị n’ime anyị. Mmụọ Nsọ ga-eduzi gị mgbe ị na-ekpe ekpere nchegharị na n’ekpere niile.
Ekpere gị ekwesịghị ịbụ nke zuru oke, ma ọ bụ na-eduzi ya na amamikpe nke ikpe ọmụma na ihere. Tụkwasị Chineke obi n’ihe niile ị na-eme. Bie ndu gi. Mana bie ndu dika ịchụso ikpe ziri ezi na ibi ndu dika Chineke kpọrọ anyị.
Chineke, anyị ji obi anyị niile hụ gị n’anya. Anyi maara na nmehie na ochicho ya gederiri anyi wepu aka n’ezi omume. Mana a na m ekpe ekpere ka anyị leba anya na nkwenye ahụ ị nyere anyị site n’ekpere na nchegharị dịka Mụọ Nsọ si edu anyị.
Daalụ, Onyenwe anyị Jizọs, maka ịchụ aja nke anyị na-agaraghị arụ ma ọlị n’ahụ anyị nke ụwa na nke mmehie. O bu na aja ahu ka anyi n’enwe olile anya ma nwekwa okwukwe na anyi n’enweghi nmehie puo mgbe anyi banyere n’ahu ohuru dika Nna, kwe anyi nkwa. N'aha Jisos, Amen.
Nke gara aga Post Gara aga post:O juru ndị njem na Rome anya ịhụ Pope Francis na mberede
Next Post → Post ozo:Nraranye nye obi di nso nke Kraist: aririo amara